Izinto ezisisekelo kanye nezinxenye zokuphila okunempilo akufanele kube kuphela engqondweni yakho, kufanele zisetshenziswe futhi zisetshenziswe ngokusebenza. Ngempela, indlela esiphila ngayo ixhomeke enhlalakahleni yethu kanye nesimo sempilo yethu.
Ngingathanda ukusho ukuthi indlela yokuphila enempilo akuyona into emisha, kodwa umphumela wezivivinyo ezahlukene. Eminyakeni engaphezu kwengu-5 eyedlule edlule, eNdiya yasendulo isayensi ye-Right Life yavela, ithatha njengesisekelo zonke izindlela zemvelo zokwelapha (zithandwa kakhulu kubantu banamuhla): ukwelashwa kwezilwane, imithi ye-herbal, aromatherapy. Igama lezesayensi yi-Ayurveda. Izimiso nezindlela eziyisisekelo ze-Ayurveda zingakwazisa kakhulu ngisho nasesikhathini sethu sokuphila okunempilo, njengoba sinesiqondiso sokwenza ukulinganisela okungokomoya, lezi zimiso ziyakwazi ukunciphisa ukungezwani kokukhathazeka, futhi zibe nemiphumela emihle emzimbeni womuntu kanye nempilo ngokujwayelekile.
Abantu abaphila ngendlela enempilo, indlela eyodwa noma enye bayamukela izimiso ze-Ayurveda.
Kuwusizo ukuzikhumbula wena ezinye izisekelo kanye nezinxenye zokuphila okunempilo ezivela kumahlengikazi aseNdiya.
Imithwalo yemvelo inomthelela omuhle empilweni, uqinise ithoni ye-muscle, unike umzimba nomoya vivacity. Zikhethele uhlobo lokuzivocavoca oluzokulethela injabulo, nokuthi uzokwenzani ngenjabulo: ukudansa, yoga, ukubunjwa, i-aerobics, i-athletics, ukubhukuda ngisho nokusa nje ekuseni kuhamba emoyeni omusha. Ngisho nje ukwenza nje ukuvivinya kwasekuseni, usuvele unikeza umzimba wakho umthwalo ngokomzimba, okungukuthi, ngokusetha umzimba wakho ngezwi elihle nempilo. Into esemqoka okufanele uyikhumbule lapho wenza umzimba othile ngokuzivocavoca ukuhambisana nokuhlala njalo. Imithwalo kufanele ifakwe njengoba iseshini iqhubeka. Futhi lezi zifundo ngokwabo kufanele ziqhutshwe njalo, izikhathi ezimbili noma ezintathu ngesonto.
Uma uhamba, gcina umhlane wakho uqonde, uphakamise, unganciphisi amehlo akho, ungawafaki eceleni. Izwe elihle neliphelele elikuzungezile-libuke, ujabule kulokho okukuzungezile! Abantu, izitshalo, izilwane - konke lokhu kufanele kubangele injabulo yakho. Hlela emuva, uqondise amahlombe akho, ngakho uvumele umzimba wakho uzizwe uxhumano lwakho olungabonakali nezulu, nalo lonke indawo, ngaleyo ndlela uzikhokhise ngamandla anamandla. Zizwe ubuhle bakho, ubulili, ukuheha. Noma yimuphi owesifazane uyajabula lapho abantu bembuka. Ngendlela, iqiniso lokuthi owesifazane ukwanelisekile yena, ukubonakala kwakhe, umsebenzi wakhe, njenganoma yini enye, ukumenza abe nenjabulo futhi unikeze ubumnene. Futhi namanje, uma sinelisekile ngokubukeka kwethu, sinenkinga yempilo embalwa.
Ngemuva kosuku ngalunye lomsebenzi, funda ukuchitha isikhathi kubathandekayo bakho. Kuwusizo ukuhamba nxazonke epaki, ukuphefumula umoya omusha, ukuphazamisa ekukhathazeni komsebenzi. Ngakho-ke uzosungula ubudlelwane obungokomoya nemvelo, esizalwa kithi kusukela ekuzalweni. Thatha ukuthula, cabanga ngokuphila kwakho, ujabulele imisindo yemvelo. Ukuhamba okunjalo kwenza ikhanda licace, imicabango engadingekile iyahamba. Uma kungekho nhlobo isikhathi sokuhamba epaki, bese uvuselela igumbi ngaphambi kokulala.
Umkhuba okhethekile, kusukela ekubukeni kwe-Ayurveda, uyadla. Ungalokothi uhlanganise ukudla kwakho nezinye izinto: ufunda incwadi noma ubukele imibukiso ye-TV. Ukudla uhlobo lokuzindla. Uma ucabanga ngokudla, kuletha izinzuzo eziningi emzimbeni wakho. Yidla ngisho nezitsha eziyisisekelo kakhulu ngenjabulo, ngakho bazozuza umzimba. Yidla, uma kungenzeka, ngokunembile, ngakho ugcine impilo yakho futhi ukhulise impilo yakho, futhi ususe nezifo ezihlukahlukene. I-Ayurveda ayiwamukeli ukudla ngemva kokushona kwelanga, ngoba ngemva kokushona kwelanga umzimba wethu usuhlelwe ukuphumula, futhi ukudla ngalesi sikhathi kungathinta kakhulu izinga lokulala.
Yenza yonke imisebenzi yasendlini enomoya ophezulu: hlambulula futhi ngesikhathi esifanayo umdanso, ugeze izitsha uphinde ucule ingoma yakho oyintandokazi, ngakho ukuhlanganiswa kuyoba msinya futhi ngeke ushathele. Izinkinga zasekhaya azikhathali njengoba ucabanga, okubaluleke kakhulu, ukwenza imisebenzi yendlu yasemakhaya ngefantasy. Phela, ngisho nezinguquko ezivamile zelineni lokulala zingaguqulwa zibe uhlobo lomkhuba wokuguqula impilo yakho ibe ngcono, entsha, entsha.
Ungalethi sonke isikhathi sakho samahhala, ukuphumula ngokweqile yi-TV, ngoba umhlaba ucebile kakhulu! Futhi uma ufuna nje ukuhlala ekhaya, kungcono ukuzibandakanya ngokufunda, ukugqoka, ukubopha - ngubani othanda lokho.
Hlala, uhlabelele umsindo, ubuthongo obunempilo: ventilate ekamelweni, uthathe amakhethini aqinile, ungaphuza indebe yobisi uju, uzenzele ukusikhipha izinyawo - konke lokhu kuthuthukisa ubuthongo.
Isizathu esibalulekile sokuphila okunempilo ngefilosofi yaseNdiya ukulala ngesikhathi esifanayo - kungakapheli phakathi kwamabili, futhi mhlawumbe ngehora leshumi nantathu, ukuze ungaboni phansi indlela osebenza ngayo umzimba wakho. Khona-ke ngeke kube nezinkinga eziningi zezempilo. Ukulala okuhle kakhulu futhi okuwusizo kakhulu ngakwesokunxele, ngakho-ke usesikhundleni esihle kakhulu.
Ukusebenzisa lezi zisekelo eziyisisekelo nezinxenye zokuphila okunempilo, uzoba lula, enhle kakhulu! Futhi impilo yakho ingaba nomona kuphela.
Indlela yokulahlekelwa isisindo ngamakhilogremu angu-15: izimfihlo ezintathu zika-Irina Dubtsova
Ungabuyisa kanjani emva kwamaholide?
Indlela yokucwiliswa kwamanzi lymphatic
Indlela yokusebenzisa izilonda zokwelapha
Izizathu zokwanda kwezinga lokushisa kusihlwa
Iyini i-goitre nokuthi ingayiphatha kahle kanjani?
Imvelo vs. Izifo: TOP-3 imikhiqizo elwa nokuvuvukala
Kungani abafana beya emantombazaneni abo?
Umfana wami ungumculi wepop
Izithombe ezinhle-zihalalisela ngoNyaka Omusha wezi-2018 Izinja
Izinwele ezinhle ezihlotshiwe kahle
Izinkinga zokuqonda okufanayo emsebenzini
Yenza isinkwa sezinkondlo
Iphupho elihle lomntwana wakho
Indlela Yokwenza I-Cherry Jam
Ukuqagela ukuthi ubani lawa ma-mama angama-10? (Izithombe eziningi ezigcinwe ezigciniwe)